Xildhibaano dacwo ka ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Galmudug | Keydmedia
Xildhibaano dacwo ka ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Galmudug
Xildhibaanadaan oo tiro ahaan lagu qiyaasay in ka badan 50 mudane ayaa ka cabanaya in wasiiru dowlaha uu u diiday gelitaanka Aqalka madaxtooyada, iyo in lagu xad gudbay xasaanadda uu siinayo dastuurka maamulka Galmudug.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo dacwo ah ayaa Mooshin ka keenay wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulkaas Cumar Shiddo.
Sida aan macluumaadka ku heleyno qaar ka tirsan xildhibaanadaan ayaa mooshinka saxiixay, iyagoona u gudbiyay guddoomiyaha barlamaanka maamulkaas Dr Maxamed Nuur Gacal, waxaana la filayaa in fadhiga gollaha oo furmaya khamiista oo ku beegan 27-ka bishan, lagu soo qaato arintaan.
Sidoo kale wasiiro dowlaha madaxtooyada Cumar shiddo ayaa laga yaabaa in looga yeero fadhiga Gollaha, si uu isaga difaaco eedeynta loo soo jeediyay, waxaana hadda socdo goox siyaasadeed oo arintaan ku aadaan oo laga dareemayo magaalada Dhuusamreeb uu hadda ku shaqeeyo Baarlamaanka maamulkaas.
Bilooyin ka hor ayay aheyd markii xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay Mooshin ka keeneen Guddoomiyaha baarkamaanka maamulkaas, iyagoona ka gadoodsan mushaar la'aan iyo in uu safarro joogta ah ku aado magaalada Muqdisho, balse aanu joogeyn xarunta shaqada Galmudug, walow markii dambe si hoose loo xalliyay.